Coreopsis waa ubax ka mid ah qoyska Astrov, geedka dilka ah ama geedka sanadlaha ah. Asal ahaan ka soo jeeda Coreopsis laga bilaabo Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, halkaas oo ay ku koraan meel kasta xitaa wadooyinka dhexdooda. Beeraha ubaxa waxay jecel yihiin ubax dheer iyo sahlan ee beerashada iyo daryeelka. Sanadlaha Coreopsis Coreopsis sanadlaha ayaa ka dheeraaday qaraabadooda muddada dheer, badanaa xittaa aad u qurux badan.
Qoob-ka-soo-saarka balaashka xilliga xagaaga
Bubbyplodnik waa geed geed qurux badan oo haynaya saamaynta qurxinta inta lagu jiro xilliga daaqsinta oo dhan. Foomamka caleemaha cufan ee cufan ee lafdhabarta. Caleemaha qoraxda ah waxay siiyaan muuqaal gaar ah. Iyadoo ay saameyn ku yeelatay saameynta qurxinta, bambooberry waxaa lagu kala soocay astaamaha beeraha.
Gladiolus: sharaxaad of noocyada ugu wanaagsan ee beerta
Dabeecadda, waxaa jira qiyaastii 200 nooc oo gladioli leh magacyo kala duwan oo leh dabeecadahooda gaarka ah. First of all, waa in la ogaadaa in ay jiraan 4 kooxood oo midabyada sida: Butterfly; Large-flowered; Caajis; Hore. Dhamaan ubaxyada ka soo baxa ee noocyada kala duwan ee gladioli yihiin raaxo iyo aan caadi ahayn.
Kor u qaadista qoryaha Kawaanka ee beerta, beeritaanka iyo daryeesha geed geedeedka cad
Shirkadda Nordman waa dhirta quruxda badan leh oo aad qurxin kartid shukumaan shakhsi ah. Sidaa awgeed, waxaad sidoo kale qurxin kartaa sawirkaaga geedkan quruxda badan, waxaan hoos ku qoran waxaan kuugu sheegi doonnaa wax badan oo ku saabsan shayga Nordman iyo ku saabsan beeraha iyo daryeelka. Nordman firfircoon: sharrax Nordman, ama Caucasian, waa geedka qallafsan, oo markii ugu horreysay lagu ogaaday beerta botanist Alexander von Nordman, ka dib markii la helay magaciisa.
Goorma ayaa ah waqtiga ugu wanaagsan ee lagu ururiyo dheecaan cuncun leh
Birch bjørk waa cabitaan dabiici ah oo aad u faa'iido badan, kaas oo lagu dhajiyay tiro ballaaran oo bogsoon leh iyo saameyn aad u faa'iido leh oo ku saabsan jirka bani'aadamka. Tani waa waxa loo yaqaan 'elixir of beauty', caafimaadka, xoogga iyo xoog. Taasi waa sababta oo ah waxa ku jira nafaqooyin badan, asiidhyada dabiiciga ah iyo walxaha raadraaca.
Xaalad barkeed: sida ay u eg tahay, waxa halis ah, sida loo tirtiro
Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in lamaanaha xayawaanku aysan ku kala duwanayn qiyaasta weyn, waxay waxyeelo weyn u geystaan ​​beeraha beerta, dhismayaasha dhirta iyo meelaha dhirta. Sannadihii ugu danbeeyay, isbeddellada xaaladaha cimilada waxay keeneen dhalmo badan oo cayayaankaas ah. Intaa waxaa dheer, dhirbaaxo ballaaran oo dhirbaaxo ah ayaa taas ka dhigaysa iyada oo aan si habboon loo hubin sirqaha dhirta dhicisoobay iyo jirridda kuwaas oo sabab u ah taranka sabiibta.
Sifooyinka casriga ah ee geedo geedo midho leh, talooyin iyo talo ku saabsan dib u noolaanshaha beerta
Beeraley kastaa waxay dooneysaa inay soo saarto tufaax, isteroberi, malab, jiir iyo waxyaabo kale oo ku yaal gurigiisa. Laakiin taasi waxaad u baahan tahay daryeelka iyo wakhtiga daryeelka geedaha. Mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee daryeelka noocaas ah waa manjooyin iyo dib u soo kabashada taajka. Manjooyin khatarta ah: sharaxaadda iyo noocyada Qorista dhirta saxda ah ee geedaha gaboobay ee gurigaaga ku yaala waxay horseedaa dib u soo kabashada dhirta.
Baro wax walba oo ku saabsan daryeelka saxda ah iyo taakulada junkie
Jaanguska guduudan-qoyan ee cirridka caajisku waa xiiso u ah dhirta beerta dalooshada ah. Waxay u egtahay in ay qaadato shaqo badan iyo dadaal si ay u hesho inflorescences ee istiraatiijiyado isdaba joogta ah, laakiin xaqiiqda ah dhaqanka waxa uu ku riyaaqayaa adkaysigeeda iyo aan qabyo ahayn. Tani waa ikhtiyaarka ugu fiican kuwa doonaya in ay muujiyaan beerta, iyada oo aanad sahay u haynin ilaha dheeraadka ah.
Haddii shinni yahay geedka malab, bumblebee waa mid waxtar leh sida pollinator ah ee dhirta, ka dibna dabocase u muuqataa in ay yihiin cayayaanka gebi ahaanba aan faa'iido lahayn in kaliya abuuri kartaa halis ah dadka. Tani ma ahan mid run ah - baaldiga ayaa sidoo kale cunay cayayaanka kale, cayayaanka iyo kuwa waxtar leh, tusaale ahaan, shinni. Sidaa darteed, waa inay la dagaalamaan inta badan.
Sida loo koro daruuraha: shuruucda beeraha iyo daryeelka
Waxaa ka mid ah dalagyo kala duwan oo berry ah oo inta badan laga helo cagaaran xagaaga, qaarna way ka fog yihiin in loo yaqaano qof walba. Waa sida wakiil ka mid ah adduunka berry ah in cloudberry waa berry leh tiro ka mid ah guryaha faa'iido leh. Waa maxay, oo waa mid aad u fudud in la qabsado iyada beerista on goobta - akhriso on.
Sida loo ilaaliyo beerta iyo beerta ka soo dhaxan
Xilliga guga iyo xilliga dayrta ma aha wax aan caadi ahayn. Isbedelka noocaan ah ee heerkulka wuxuu keenaa khatar toos ah beerista beerta iyo beerta, tan iyo ugxan-miro iyo ubaxyo, inta badan, waa mid aad u jilicsan oo--2 ° C horayba u dhaawacmi karta. Marka la eego, waxay aad u muhiim u tahay inuu bannaanka u ogaado sida loo ilaaliyo beerta iyo beerta ka soo horjeeda sida dabiiciga ah.
Buckthorn badda waa mid aad u dhadhan fiican leh, karis iyo bakeer caafimaad leh, laakiin dad badan isaga gudbiya, sababtoo ah waxay si fudud ma garanayaan sida iyo waxa laga saaro laanta. Xaqiiqdii, ma aha wax walba waa mid aad u adag, dadka ayaa muddo dheer ka fikiray siyaabo badan oo tan loo sameeyo. Shuruudaha goosashada Goobaha cimilada ee kala duwan, muddada bislaanshaha ee buckthornka badda way kala duwanaan kartaa, siday u kala horreeyaan, waxay noqon doonaan kuwo kala duwan iyo wakhtigii beergooyska.
Waa maxay iyo sida loo sameeyo suunka kalluumeysiga?
Dhibaatada cayayaanka, oo burburiya tiro badan oo geedo beerta ah, ayaa ka jira aag kasta. Si wax ku ool ah looga takhaluso waxay caawisaa suunka taranka - qalab loogu talagalay uruurinta iyo burburinta cayayaanka, taas oo ah xargo dherer ah 20-25 cm oo ka timaadda qalabka kala duwan. Faa'iidada weyn ee dabinka waa amniga deegaanka ee la xidhiidha dhirta iyo bini-aadanka iyadoo la raacayo habka farsamooyinka saameynta cayayaanka.
Miyuu suuragal yahay in uu ku koro geed qoyan guriga?
Tulip liriodendron, geed cad, caleemaha jaalaha ah waa dhammaan magacyada nooc ka mid ah dhirta reer Magnolia. Marar badan lama arki karo magaalooyinka caadiga ah. Aan aragno waxa dhirta uu yahay mid gaar ah. Xagee sii kordhaya iyo sidee ayay u egyihiin? Geedka Tulip waa geedka aan caadiga ahayn. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ay jiraan laba nooc.
Bannaanka u ma u baahan tahay baska tallaalka?
Najirada guluubka waa qalab beerta lagu isticmaalo oo loo isticmaalo bannaanka u ah geedi socodka daryeesha beeridda iyo geedo geedo ah oo ku yaal dhulkooda. Waxaa muhiim ah ma aha oo kaliya ninkii beerta qibrad leh isticmaali karaa qalabka mucjiso sida, laakiin sidoo kale beerta nudaha ah.
Ku qurxin goobta oo leh baadiyaha quruxda badan ama geedka yar yar waa wax caadi u ah bannaanka. Waxyaabo badan waa in la tixgeliyaa: laga bilaabo xaalada ciidda si loo dayactiro. Hase yeeshee qodobka go'aanka ah wali waa habka qaybinta iyo degitaanka. Aan aragno sida loo kiciyo viburnum. Faafinta by gooyn Tani waa ugu waxtarka badan, laakiin waqti isku mid ah, habka adag oo adag.
Kalina guryaha waxtar leh
Мало найдется людей, не знающих о полезных свойствах калины, которые она оказывает на иммунитет человека в целом и при лечении простудных заболеваний. Si kastaba ha ahaatee, kuwani ma aha faa'iidooyinka kaliya ee geedka, ka sokow, ma aha oo kaliya berry, laakiin sidoo kale qaybaha kale ee geed ayaa leh saameyn ku daweyn. Noocyada codsiga ee dhaqanka berrito waa ballaaran.
Blueberry "Northland": sharaxaadda iyo beerista noocyo kala duwan
Nooca waqooyiga ee gaarka ah wuxuu naga siiyay bakeeriyada blueberry. Qiimaha ay u tahay ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu ku yaalaa caalami ahaan: marka lagu daro berry dhadhan fiican leh, dhirta waxaa loo isticmaali karaa ulajeeddooyin lagu qurxiyo iyo naqshad dhuleed. Sharaxaad ka mid ah noocyada kala duwan ee Blueberry "Northland" waxaa loola jeedaa in hoos loo dhigo, ilaa 120 cm, noocyo hore u adkeysi leh iyo baraf udgoon oo lagu taliyay beerista beeraha.
Waa maxay khariidadda halista ah ee geedo khudradeed iyo sida loola macaamilo
Aphid waa laga yaabaa mid ka mid ah cadowga ugu caansan ee beerta, beerta iyo beeraha aqalka. Cayayaankaan khatarta ah waxaa laga helaa meel kasta, iyo xilliga firfircoonidiisu waxay sii socotaa inta lagu jiro xilliga guga - laga billaabo horraanta gu'ga ilaa barafka intiisa ugu badan. Cuntada cayayaanka ee cayayaanka sidoo kale waa ciribtirka: aphid oo leh cunto isku mid ah ayaa burburiya ubaxyada, geedaha miraha, miraha iyo khudaarta.